आङ`नै जि`रिङ्ग हुने: आमासंग शा`री'रिक सम्पर्क गरेको त्यो केटो जव छोरी माग्न त्यहि घर गयो !(भिडियाे हेर्नुस्) - Info Nepal
INFONPLरोचकआङ`नै जि`रिङ्ग हुने: आमासंग शा`री'रिक सम्पर्क गरेको त्यो केटो जव छोरी माग्न त्यहि घर गयो !(भिडियाे हेर्नुस्)
आङ`नै जि`रिङ्ग हुने: आमासंग शा`री’रिक सम्पर्क गरेको त्यो केटो जव छोरी माग्न त्यहि घर गयो !(भिडियाे हेर्नुस्)
काठमाडौं । आङ`नै जि`रिङ्ग हुने: आमासंग शा`री’रिक सम्पर्क गरेको त्यो केटो जव छोरी माग्न त्यहि घर गयो !(भिडियाे हेर्नुस्) । एक युवकले सामाजिक सञ्जालमा डेटिङको सबैभन्दा आश्चर्य पार्ने घटना सेयर गरेका छन् । घटना पढ्दा सबैलाई अचम्म लाग्यो । उनीहरुले यसलाई कुनै कथाभन्दा कम ठानेका छैनन् ।
आखिर के हो त घटना ?टि`न्ड* र(डेटिङ एप्लिकेसन अथवा वेबसाइट)मा म्याच भएपछि एक केटीसँग केटाको प्रेम बस्यो । गर्लफ्रेन्डले आफ्नो अभिभावकसँग भेट्न बोलाए । तर त्यहिँ साँझ उसले जीवनमा नसोचेको घटनाको सामना गर्नुपर्यो । २१ वर्षको युवकले केहीवर्षपहिला ४० वर्षीया महिलासँग स* म्बन्ध राखेका थिए । एक बारमा भेटिएका दुईको सम्बनध शा* री’रिक स* म्बन्धसम्म पुगेको थियो ।
बारमा भेटिएको महिलासँगको केही महिनापछि युवकले डे’टि* ङ साइट टि’न्ड* रमा १९ वर्षकी केटीसँग भेट्यो र दुवैको प्रेमसम्बन्ध शुरु भयो । दुवैबीचको स*म्बन्ध यति राम्रो भयो की केटीले केटालाई आफ्नो अभिभावकसँग भेट्न बोलाइन् । तर, केटीको घरछेउ पुगेपछि केटाको हो* स उ* ड्यो ।
केटाले देखेको घर त्यहि थियो जहाँ उ गर्लफ्रेन्डको आमासँग आइसकेको थियो । केटाले दुःखी हुँदै आफ्नो सबैकुरा गर्लफ्रेन्डलाई बतायो । शुरुवातमा गर्लफ्रेन्डलाई म*जाकजस्तो लागिरहेको थियो ।
तर युवकले उसको आमाको नाम नै भनिदिएपछि केटीले उसको कुरामा विश्वास गरिन् । त्यसपछि उनीहरुको ब्रे* क अ* प भयो। युवकले सोसल साइट रेड्डिटमा आफ्नो नाम नलेखि यसरी पूरा घ-टना लेखेका छन् । **भिडियाे हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहाेस्**
आफ्नो ज्या`नको प्रवाह नगरी साथीलाई बाढीले बगाए पछि यसरी बचाए (भिडियो सहित)
कपालमा स`र्प बे`रेर यि युवती सपिङ गर्न सपिङ कम्प्लेक्स पुगिन् , जुरोको स`र्प देखेर सबै हेरेको हेर्यै (भिडियाे हेर्नुस्)